Archives des Isotry - Midi Madagasikara
Isotry : Mpiambina tsena hita faty omaly maraina
Redaction Midi Madagasikara 15 janvier 2014 BMH, hita faty, Hjra, Isotry, Mpiambina, tsena
Omaly maraina be no nahitan’ny olona lehilahy iray nivalampatra tsy lavitra ny tsenan’Isotry. Olona handeha hamoa fivarotana no nahita azy io. Nahafantatra azy ary niezaka ny namoha. Tsy nihetsika intsony anefa ilay izy. Rehefa nojerena akiaky, hay efa tsy nisy aina intsony. Nitangorona ny olona ary dia nahafantatra an’ity lehilahy maty ity avokoa. Mpiambina tsena…